गायिका मञ्जुको कुरा बुझ्ने कल्ले………? – Gulmiews
गायिका मञ्जुको कुरा बुझ्ने कल्ले………?
गुल्मी, असार २४ । हिन्दु महिला नारीहरुको महान पर्व तिज आउँन झण्डै दुई महिना बाँकी रहदा कलाकारलाई भने तिज पर्वले लागी सकेको छ । कलाकारहरुलाई तिजका गित गाउँन र गितको म्युजिक भिडियो तयार गर्न व्यस्त रहनाले उनिहरुलाई तिज पर्वले लागेको हो ।
गत वर्षको तिजमा जस्तै यस वर्षको तिजमा पनि गायिका मञ्जु पौडेलले तिज पर्वलाई मध्य नजर राखेर “खैत बाबा बुझेको कुरा बरिलै” तिज गित सर्बजनिक गर्नुभएको छ ।
तिजको बेला बिभिन्न ठाउँमा महिला दिदि वहिनीहरु जम्मा भएर नारिका बेदनाहरुले भरिएका गाउने गितको झल्को दिलाउदै गायिका पौडेलले पनि नयाँ तिज गित बजार ल्याएको बताउनु भयो । घरमा जवानी वढ्दै गरेकी छोराीलाई बिवाह गरेर सिन्दुर, टिकी,गाजल चुरा लगाउन मन लागेका कथा बस्तुमा गित तयार भएको गायिका पौडेलले बताउनु भयो । तिजको बेला नयाँ कपडा किन्ने कुराहरु सगै आफना छोरीलाई बुवा आमाले सानै देखेका कुराहरुलाई गितमा समेटेर गित सार्बजनिक भएको पौडेलले बताउनु भयो ।
तिजको अबसरमा लगाउन मन लागेका कपडा टिकी, गाजल, चुरा बाबा आमाले नल्याइदिदा भाउजूका लगाएर हिडेकै कुराहरु गितमा रहेको गायिका पौडेलको भनाइ छ । तिजको बेला गाउँघर तिर महिला दिदि बहिनीहरु जम्मा भएर नारी बेला पोख्ने खालको गितलाई झल्को दिलाउने गरि गित तयार भएकोले धेरै दर्शक श्रोताले गितलाई मनपराउने उहाँको भनाई छ । गायिका मञ्जु पौडेलको एकल स्वर रहेको गितमा चर्चित गितकार एकनारायण भण्डारीको लय शब्द रहेको छ । गित बिएम एस म्युजिक प्रालिले बजारमा ल्याएको छ ।